Ambongadiny Chandelier PC-8255 fitaratra fitaratra fitaratra chandelier toetra tsotra mpanamboatra mpamokatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-8255 Glass vera chandelier toetra tsotra chandelier tsotra chandelier
Amboary ny toerana misy anao ao amin'ny Pulsar Chandelier. Miaraka amin'ny antokon-kavoakelan'ny vera misy an'io, ny famirapiratan-tarehy kanto dia manome ny hakantony sy ny haitraitra. Ireo tsorakazo dia taratry ny fahazavana amin'ny fomba malefaka, mamorona hazavana manaitra.
Ity chandelier ity dia fanampiny tsy mampino amin'ny tranonao manolotra ny asany sy ny endrika mahazatra. Ianao dia ho tia ny fanovana an'io tranonao io amin'ny endriny sy ny fiasa mahasarika azy. Ny fampifangaroana ny endrika tsotra sy ny tsipika madio dia manampy amin'ny firavaka faran'izay kely indrindra amin'ity lalao ity.
Teo aloha: Chandelier PC-8262 Light chandelier metaly kanto hazavana
Manaraka: Chandelier kanto boribory boribory chandelier Chandelier PC306
Chandelier PC-8288 Jiro kristaly hazavana mihaja ...
Chandelier PC-8262 Light zava-kanto chandelier ...
Chandelier PC-8328 Light Chandelier mihaona nihaona ...